Vikela idivayisi yethu ye-Android ngamaphasiwedi aqinile | Izindaba zamagajethi
Ezinye izindlela ezi-5 ezinhle zokuvikela i-Android ngamaphasiwedi
Kulezi zinsuku ukuthi abantu abaningi bathola ukuba nomakhalekhukhwini ngohlelo lokusebenza lwe-Android, isidingo sokuvikela ulwazi oluqukethwe kuso singesinye sezinto ezibaluleke kakhulu okufanele sizenze; Ngaphandle kokuthi lolu hlelo lokusebenza lwe-Android liphakamisa izindlela ezahlukahlukene zokuphepha zokuvimba ukufinyelela endaweni yalo, azilusizo lapho kuzanywa khiya izinhlelo ezithile.
Ukube besike sakhuluma ngezinye izindlela ezithokozisayo ze khiya i-iPad yethu manje, unikeze abancane ukuze bakwazi ukuxhumana ngokuzethemba nedivayisi, isidingo esicishe sifane yiso esizosiphakamisa kulesi sihloko, lapho sigxile kumadivayisi eselula Android (ithebhulethi noma omakhalekhukhwini) kuzoba umgomo wethu oyinhloko.
1 1. Khiya idivayisi yakho ye-Android nge-AppLock
2 2.Umvikeli wohlelo lokusebenza lwe-Smart
3 3.Umvikeli wohlelo lokusebenza ophelele
4 4.I-Visidon Applock ye-Android
5 5.I-Smart Lock ye-Android
1. Khiya idivayisi yakho ye-Android nge-AppLock
Ngaphandle kokungabaza, lolu hlelo lokusebenza oluhle kakhulu esingalulanda ku-Google play, olusinika ithuba lokuthi vimba eyodwa, eziningana noma zonke izinhlelo zokusebenza esizifakile kudivayisi yethu Android; Enye indlela yokugcina kulula ukuyenza, ngoba ukuvimba yonke idivayisi kuzosivimbela ukuthi senze ukuvimba okukhethiwe.
Noma kunjalo, uma sinenqwaba yezicelo futhi sifuna ezimbalwa kuphela ukuthi zibulawe ngumuntu esizo-oda kuye umakhalekhukhwini wethu, kuzofanela siye ekucushweni kwe-AppLock ukuqala khipha kuphela isicelo esizosetshenziswa; Ilokhi ayizinikeli kuphela kuzinhlelo zokusebenza ezifakiwe namathuluzi, kepha nakwikhamera phakathi kweminye imisebenzi embalwa.
Ukufakwa kwepinikhodi encane kuyadingeka njengephasiwedi ukuvula yonke idivayisi.
2.Umvikeli wohlelo lokusebenza lwe-Smart
Lolu hlelo lokusebenza lufana kakhulu nalokhu okungenhla, noma ngabe unjiniyela walo uphakamisa ezinye izici ezithandekayo ongazisebenzisa. Sicabanga ukuthi sivimbe ifoni yethu Android futhi ilahlekile, othile angazama ukuvula iqembu lethu. Ngemuva komzamo we-3 ohlulekile lolu hlelo lokusebenza Android thatha isithombe salowo muntu ngekhamera yangaphambili.
Kuzosisiza futhi ukuvimba ukuthunyelwa kwemiyalezo ye-SMS nokuthi kungenzeka ukuthi sishaye izingcingo; inguqulo yamahhala ifaka phakathi ukukhangisa, ukwazi ukukuqeda uma kuthengwa uhlobo olukhokhelwe kwenziwa.
3.Umvikeli wohlelo lokusebenza ophelele
Ngaphezu kokusisiza ukuvimba izinhlelo ezithile ezizosetshenziswa ngesikhathi esithile, lolu hlelo lokusebenza Android kufihlwa ngemuva (kubenze bangabonakali) lezo esivimbe ngaleli thuluzi.
Ngaphezu kwalokho, uMvikeli wohlelo lokusebenza ophelele uzokhombisa isikrini esincane "sokutholwa kweminwe yamanga", lapho umsebenzisi ebeka khona umunwe bese uhlelo luyeqa ewindini elisha lapho kufanele bathayiphe khona iphasiwedi eyayihlelwe ngaphambilini; uma uphikelela ekuzameni ukuvula uhlelo oluvinjiwe nolubonakalayo, iwindi elintantayo lizovela nalo umlayezo "mbumbulu" wokuthi umuntu ongenile ayeke ukwenza lowo msebenzi.
4.I-Visidon Applock ye- Android
Ukufana kuhle impela ngezinhlelo zangaphambilini lapho uvimba uhlelo olulodwa noma eziningi nemisebenzi yedivayisi yeselula Android; umehluko uku ukutholwa kobuso, isimo esidingekayo ukuze sikwazi ukuvula iqembu lonke noma ithuluzi elilodwa ngokuya ngentshisekelo yethu.
Ngoba uhlelo lokuqaphela ubuso lungahluleka, IVidison AppLock yenza umsebenzisi afake iphasiwedi ezosetshenziswa njengenye indlela yokuvula; Ngamanye amagama, uma ngasizathu simbe uhlelo lokusebenza lungakwazi ukubona ubuso bethu futhi ngaleyo ndlela livule ikhompyutha, lapho-ke singasebenzisa iphasiwedi ukuyivula ngokuphelele.
5. I-Smart Lock se Android
Mhlawumbe okuphelele ngokwengeziwe, lolu hlelo lokusebenza Android inenhloso yokuvimba izinhlobo ezahlukahlukene zezinto ezingaba yingxenye yeselula yethu. Lapho nje sifaka futhi sisebenzisa i-Smart Lock sizothola i-interface enamathebhu ama-3, okuyi: izinhlelo zokusebenza, i-multimedia noxhumana nabo.
Ngale ndlela, umsebenzisi angavimba izinhlelo ezithile ezifakiwe kudivayisi yakhe yeselula Android, amafolda noma amafayela athile (izithombe noma ividiyo) futhi, nohlu loxhumana nabo esibagcinile kuselula.
Imininingwane engaphezulu - Ungavimba kanjani amadivayisi eselula e-Apple ukuwadlulisela ezinganeni
Ukulandwa kwamahhala - I-AppLock, Smart App Umvikeli, Umvikeli wohlelo lokusebenza ophelele, I-Visidon Applock, Ukukhiya okuhlakaniphile
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ezinye izindlela ezi-5 ezinhle zokuvikela i-Android ngamaphasiwedi
Izinqamuleli zekhibhodi ku-Windows 8.1 ukusebenzisa izinhlelo zakho zokusebenza
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili ze-Ex-Metro Style zeWindows 8.1